ढोरपाटनमा १० झारल र १९ नाउरको शिकार , ४६ लाख राजश्व |
ढोरपाटनमा १० झारल र १९ नाउरको शिकार , ४६ लाख राजश्व
मुलुकको एक मात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षमा चालु आवमा १० झारल र १९ नाउरको शिकार भएको छ । शिकारका लागी पहिलो याम असोज देखी कात्तिक र दोस्रो याम फागुन देखी बैशाख सम्ममा संचालन भएको थियो । लाखौं खर्चेर विदेशी शिकारीहरु आरक्षका विभिन्न शिकार ‘ब्लक’मा पुगी शिकार खेलेका थिए । शिकारबाट ४६ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजश्व उठेको आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताए । कार्यालयका अनुसार पहिलो शिकार याममा ४ झारल र ९ नाउरको शिकार भएको थियो भने दोस्रो याममा ६ झारल र १० नाउरको शिकार गरिएको थियो ।
आरक्षका घुस्तुङ, बार्से, सेङ, दोगाडी, फागुने, र सुनदह गरि ६ ‘ब्लक’मा शिकार खेलाउने गरिएको छ । शिकारका लागी नेपाल वाइल्ड लाईफ सफारिज, हिमालयन सफारिज, ग्लोबल सफारिज र ट्रयाक एण्ड टे«ल्र्स प्रा.लि.मार्फत् शिकारी ढोरपाटन पुगेका थिए । शिकारीले रोजेको ‘ब्लक’मा लगेर कम्पनीहले शिकार खेलाउने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हरेक शिकार याममा बोलपत्र आह्वान गरेर शिकारको कोटा र राजश्व दर निर्धारण गर्ने गरेको छ । यो वर्ष २० नाउर र ११ झारलको कोटा भएपनि १९ झारल र १० नाउरको मात्र शिकार भएको हो । शिकारको माग बढी हुँदा राजश्वको दर पनि बढ्ने र माग घट्दा राजश्व पनि घट्ने गरेको छ । प्रर्तिस्पर्धामा बढी बोलकबोल गर्ने कम्पनीले शिकार गराउने अनुमति पाउने गरेको छ । यो वर्ष प्रर्तिस्पर्धा कम हुँदा शिकारको राजश्व दर पनि घटेको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।
नाउर शिकारको अधिकतम दर रु. १ लाख १५ हजार र झारलको रु. २ लाख २१ हजार कायम भएको थियो । शिकार कम्पनीले केही वर्षअघि एउटा झारल शिकारको रु. १३ लाख ५ हजारसम्म बुझाएका थिए । शिकारको दर बढ्दा वार्षिक करोड भन्दा बढी राजश्व उठ्ने गरेको छ ।
बन्दुक, गोलीगठ्ठा र सहयोगीसहित शिकारीहरु आरक्ष आउने गरेको अधिकृत बरालले बताए । खर्चिला र साहसी शिकारीले विकटमा रहेका ‘ब्लक’मा शिकार खेल्न रुचाउछन बराले भने, ‘विदेशी शिकारी सहितको टोलीले १५ दिन शिकारमा बिताउने गरेको छ । शिकार खेल्न अमेरिका, रुस, स्पेन, साउथ अमेरिका, नर्वे जस्ता देशबाट पेशेवर शिकारीहरु वर्षेनी ढोरपाटन आउने गर्छन् । साहसिक यात्रा र रोमाञ्चक शिकार अनुभवको लागि ढोरपाटन शिकार आरक्ष विदेशीहरुको आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । शिकार आरक्षको वरी परि होमस्टे संचालनका लागी ढोरपाटन नगरपालिकाले पहल थालेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा यातायात नियमित संचालन भए सँगै आरक्ष क्षेत्रमा पर्यटकहरु बढदै गएका छन । शिकार आरक्ष बाह्रय र आन्तरीक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र विन्दु बनेको छ ।
४२ फर्मविरुद्ध राजश्व चुहावटको मुद्दा
कोरियाले ५६ हजार कामदार लैजाने
ढोरपाटन नगरका आफ्नै प्रहरी
तुरतुरे तालमा र्‍याफ्टिङ सुरु
बागलुङकाे ताराखाेलामा भैसीको पाडापाडी हुर्काउने किसानलाई भत्ता
बडिगाड महोत्सवको आर्कषण बन्यो ३५ किलोको खुकुरी
बागलुङमा भीषण आगलागी
बागलुङमा अत्यधिक चिसोले एकको मृत्यु
मुस्ताङमा पर्यटकको ओईरो